ज्योति विकास बैङ्क बैङ्किङ क्षेत्रमा कसरी अघि बढिरहेको छ ? बैङ्कको गति विधि के हुँदै छन् ?
ज्योति विकास बैङ्क राम्रो सम्भावना बोकेको अलग्गै पहिचान भएको विकास बैङ्क हो । यसले आफ्ना लगानीकर्ताहरुको हित गर्दै राष्ट्र विकासमा फड्को मार्न सक्षम छ । जाजरकोटदेखि खोटाङसम्म शाखाहरु विस्तार छन् । बैङ्किङ सुविधा नभएको ठाउँमा नाफालाई विचार गरेर काम गर्ने विचार छ । राप्ती–भेरिसँग मर्जका लागि प्रोसिङमा गइसकेको छ । हामीले राम्रा संस्थाहरु छनौट गरेर मात्रै काम गर्छौ । बैङ्कको चुक्त पँुजी १ अर्ब १० करोडबाट बढाउनको लागि यसलाई ‘राइट सेयर’मा आह्वान गर्नको लागि प्रक्रियमा छौँ । राप्ती भेरी विकास बैङ्क गाभिने हुँदा करिब २ अर्ब ३६ करोड पुग्नेछ । अब हुने ३४ वटा शाखा विस्तारसँगै यो आर्थिक वर्षमा करिब ६ वटा शाखा विस्तार हुनेछ । राम्रो काम गर्ने जनशक्ति (ह्युमन रिसोर्स) को लागि प्रोफेसनल लोन प्रवाह गर्ने गर्छांै । ‘माइक्रो स्मल मिडियम इन्टरप्राइजेज’ साना कारोवार गर्नेहरुलाई सजिलोसँग ऋण प्रवाह गर्नका लागि नयाँ स्किम बनाएर सुविधा उपलब्ध गराएका छौं ।